Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राेचक खबर – Page5– Janata Live
अभियनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी तृणमुल कांग्रेसकी सांसद नुसरत गर्भवती छिन्। उनी गर्भवती भएपछि उनको चर्चा पनि चुलिएको छ। मानिसहरुले उनी गर्भवती भएपछि प्रश्नसमेत तेर्स्याइरहेका छन्। उनी गर्भवती हुँदा मानिसहरुको टाउको दुखाइको विषय किन बन्यो? खासमा नुसरत र उनका पति निखिल जैनबीच पछिल्लो समय असमझदारी रहेको छ। पछिल्लो समय उनीहरुबीच बोलचालसमेत नरहेको बताइन्छ। पतिसँग बोलचाल बन्दको हल्लासँगै नुसरत र अभिनेता यश गुप्ताबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि चल्दै आएको छ। यही कारणले होला उनको 'प्रेगनेन्सी'लाई लिएर मानिसहरुले थरिथरिका कुरा काट्न थालेका हुन्। यसैबीच लेखक तसमीला नसरिनले नुसरतलाई पति निखिलसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सुझाव दिएकी छन्। 'नुसरतको खबर यतिबेला चर्चामा छ। उनी...
कुन राशिका व्यक्तिले कुन रङ प्रयोग गर्दा चम्किन्छ भाग्य !!
ज्योतिषशास्त्रमा राशिको निकै महत्व हुने गर्दछ। राशि अनुसार हाम्रो भविष्यवाणी थाहा पाउन सकिन्छ।जसरी राशि अनुसार हरेक काम गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै राशि अनुसार रङ लगाउँदा निकै लाभ प्राप्त हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई कुन राशिका लागि कुन रङ शुभ हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछौँ। राशि अनुसार रङ लगाउँदा तपाईको भाग्य चम्किने गर्दछ।मेषः मेष राशिका लागि सिन्दर रङ लक्की हुने गर्दछ। वृषः वृष राशिका लागि पारदर्शी श्वेत रङ लक्की हुने गर्दछ।मिथुन राशिः मिथुन राशिका लागि हरियो रङ लक्की हुने गर्दछ।कर्कट राशिः कर्कट राशिका लागि दूध अर्थात सेतो रङ लक्की हुने गर्दछ। सिंह राशिः सिंह राशिका लागि रातो रङ...
के तपाईंहरु श्रीमान श्रीमतीको सँगको सम्बन्ध राम्रो छैन ? के तपाईहरु एक आपसमा झगडा गरिरहनुहुन्छ। यस्तो तव हुन्छ तपाईहरुको ग्रह अनुसारको स्वभावमा मेल खाँदैन । पति पत्नीबीचको तनावका कारण राशि पनि हुन सक्छ । आउनुहोस् जान्नुहोस् तपाईको कस्तासँगको सम्बन्ध राम्रो र नराम्रो हुन्छ । यसबाट तपाईंले कस्तासँग विवाह गर्न हुँदैन भन्ने सहजरुपमा थाहा पाउन सक्नुहुने छ। मेष राशिः यस राशिका मानिस बहुत साहसी, स्वतन्त्र तथा भावुक हुने गर्छन् । यसकारण मेष राशि भएकाले वृष राशि भएकासँग विवाह कहिले पनि गर्न हुँदैन । किनकी वृष राशि भएकाहरु सम्बन्धमा त्यति रुचि राख्दैनन् । जबकि मेष राशि वाललाई यस्तो गर्न मन पर्छ ।...
काठमाडौं– एउटी आमाको लागि उनको बच्चाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ । बच्चाको शरीरमा थोरै कोरियो भने पनि आमा निकै आत्तिन्छिन् । बेलायतकी २४ वर्षकी एक महिलालाई पनि यस्तै भयो । बेकी स्टाइल्स नामकी ती महिलाले आफ्ना १० वर्षका छोरा हार्वेको डाइपर बदल्ने क्रममा आफ्नो छोराको मुखभित्र प्वाल देखेपछि उनको होसहवास उड्यो । बच्चाको मुखभित्र उनको तालुमा यो प्वाल थियो । छोराको तालुमा प्वाल देखेपछि बेकीको सातो गयो । उनी निकै आत्तिइन् । उनका अनुसार प्वाल देखेपछि उनले त्यो प्वाल छुने कोसिस गरिन् तर उनका पतिले उनलाई रोके । महिलाले भनिन् ‘यो देखेर म काँपिरहेकी थिएँ ।...
भाग्य चम्कियो : खेत खन्दा गरगहनाको भण्डार भेटिएपछि…
भाग्य बलियो हुनेहरुले कुनबेला के सफलता प्राप्त गर्छन भन्ने जानकारी हुँदैन । मेहनत गर्नेहरु फलको आशा गरेर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर जब भाग्यले साथ दिन्छ तब केही नगरे पनि मानिसले नसोचेको धन सम्पती पाउँछ । भारत, तेलंगाना राज्यमा जग्गा खन्दै गर्दा एक व्यक्तिको भाग्य चम्किएपछि सबै हैरान भएका छन् । उनले जमिन उत्खनन गर्दै गर्दा जमिनमा गाडिएको गरगहनाका भण्डार भेट्टाएका हुन् । तेलंगानाका रियाल्टरले उत्खननको क्रममा सुनले भरिएको भाँडो भेट्टाएका छन् । पुराना भाँडामा राखिएको गरगहना ठुलो मात्रामा फेला पारिएको हो । उक्त भाडोमा प्राचीन आभूषण राखिएको थियो, जुन सजावटको लागि प्रयोग हुन्छन् । रियाल्टारले तेलंगानाको जनगाउँ जिल्लाको पेम्बरती...
गाडी छैन र बाटोको अवस्था राम्रो छैन भने आफूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री बजारसम्म पुर्‍याउन तथा आफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन गाह्रो हुन सक्छ। उसोभए के साइ‍कलले केही भिन्नता ल्याउन सक्छ त ? जाम्बियाका गाउँले मानिसहरुमा एउटा साइकलले जीवन नै उज्यालो बनायो । उनीहरुले नयाँ साइकल ल्याए र त्यो साइकलबाट कमाइ तीनगुणा बृद्धि गरे । छोराछोरीलाई स्कुलसम्म पुर्याए । दुर्घम ठाँउ भएकाले विद्यालय निक्कै टाढा थियो । उनीहरु छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन सकेका थिएनन् । दुर्गम गाउँ न्यून आय भएकाहरुलाई सस्तोमा साइकल बेच्ने कार्यक्रम चल्यो । सस्तोमा पाएपछि गाउँलेले साइकल किने । जाम्बियाकी अनिक लिबिन्डा गाइपालन गर्ने कृषक हुन् । विगतमा उनले...
कोरोना कालमा मानिसहरुले देखाएका मानवता र प्रेमले जो कोहीलाई गर्वित बनाउने गरेको छ । भारतमा एउटा त्यस्तै घटना देखिएको छ । भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । त्यहाँ कोरोना बिरामीहरु अक्सिजनको कारण छट्पटिरहेको भिडियोहरु आइरहेका छन् । अक्सिजन अभावमा संक्रमित बचाउन निक्कै हम्मे हम्मे परिरहेको छ । how daughter try to save mother life in bahraich after oxygen crisis ( Covid-19) यस्तै एक दृश्य भारतको युपीको बहराइचमा अक्सिजनको कमी भएपछि भाइरल भएको छ। भारतको यूपीको बहराइचको अस्पतालको भाइरल भिडियोमा बिरामी आमालाई छोरीले आफ्नो मुखबाट अक्सिजन दिइरहेको देखाइएको छ। यसअघि श्रीमतीले श्रीमानलाई समेत यसरी नै दिएकी...
दिसा गर्न लागेकी थिइन् उनि त्यहि बेला युवक पुगेर त्यसपछि…
कर णी प्रयासपछि ह त्या गरिएकी मुगु सोरु गाँउपालिका–९ कालै गाँउका नौ वर्षीया बालिका लक्ष्मी चौलागागाईको ह त्याका प्रतिवादीले बयान दिँदा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई खुवाएको देउताको कसमले अनुसन्धान सहज हुँदै आएको छ । गत २१ चैतमाकर णी प्रयासपछि सूचना बाहिर जाने डरले ह त्या गरिएको थियो । प्रतिवादीलाई प्रहरीले २३ गते पक्राउ गरेपछि घटनासम्बन्धी केरकार गर्दा प्रतिवादीले आफूलाई कु’टपि’ट नगर्ने सर्तका लागि वडा नम्बर ८ रुम गाँउमा रहेका रुम विजयी देउताको कसम खुवाउन लगाएको र आफूले पनि सत्य बाहिर आउने विश्वासमा कसम खाएको अनुसन्धानको नेतृत्वमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक नरेश विकले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले...
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जम्मा १२ राशि हुने गर्दछन्। राशि अनुसार सबै व्यक्तिको स्भाव पनि फरक फरक हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई तीन यस्तो राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका युवती देखेर पुरुष फिदा हुने गर्दछन्। वृष राशि वृष राशि हुने युवतीको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । पहिलो भेटमै पुरुषहरू यी राशिका युवतीप्रति आकर्षित हुने गर्दछन्। यो राशिका युवती निकै मेहेनती हुन्छन् र आफूले गरेको काममा सहजै लक्ष्य हासिल गर्छन्। यिनीहरूको बोल्ने शैली एवं सुन्दरताले सबैको मन लोभ्याउन सक्छ । यिनीहरू सौन्दर्य एवं कलाप्रेमी हुन्छन् । कला क्षेत्रमा सजिलै सफलता हात पार्न सक्छन् । यिनीहरूको दिमागमा सदैव थुप्रै योजनाहरू बनिरहेका हुन्छन् ।...